Xakamaynta Faafidda Faafida Hadda
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Silig News » Xakamaynta Faafidda Faafida Hadda
Tirada dadka uu ku dhacay kala duwanaanshaha Omicron ee COVID-19 ayaa jabiyay diiwaannada tan iyo markii uu billowday sanadka cusub. Natiijada mowjadda cusub awgeed, qalabka tijaabada ayaa gabaabsi noqday.
Sida laga soo xigtay Anthony S. Fauci, madaxa lataliyaha caafimaadka ee Madaxweyne Biden, waxay noqon doontaa mid aad muhiim u ah "inaan helno awood weyn oo tijaabo ah, gaar ahaan marka baahida baaritaanku aad u sarreeyo, oo ay weheliso isku darka kala duwanaanshaha Omicron laftiisa, iyo sidoo kale xilliga fasaxa, halkaas oo dadku ay rabaan inay helaan heerkaas dheeraadka ah ee hubinta in la ilaalinayo, xitaa haddii lagu tallaalo oo lagu kordhiyo." Toddobaadkan, dawladdu waxa ay kaga jawaabtay iyada oo furtay degel ay dadka Maraykanku ku codsan karaan baadhis COVID-19 oo bilaash ah, guriga dhexdiisa ah. Todos Medical Ltd., Moderna, Inc., Pfizer Inc., Regeneron Pharmaceuticals, Inc., Vaxart, Inc.
Dhanka kale, magaalada New York, oo mar labaad xudunta u ah masiibada ka jirta Mareykanka, ayaa lagu dhawaaqay in mas'uuliyiinta magaaladu ay ka wada xaajoonayaan ku-noqoshada ku-meel-gaarka ah ee waxbarashada fog ee tobanaan kun oo arday ah oo aan soo xaadirin fasalka. "Falanqaynta dhabta ah ee muujinaysa inaan ku soconay waddada saxda ah. Carruurta guriga joogtay 15% ayaa kordhay ama suurtogalnimada in la kashifo. Eeg waxa nambarku ahaa haddii ay dugsiga ku jireen. Boqolkiiba hal,” duqa magaalada Eric Adams ayaa sharaxay.
Todos Medical Ltd. ayaa hadda ku dhawaaqay war deg deg ah oo sheegaya, "La shaqeynta guddiga martigelinta NFL, Celebrity Sweat®, astaanta qaab nololeedka caanka ah ee #1 waxay la soo noqotay 22nd Annual Celebrity Flag Football Challenge® oo uu soo bandhigay Todos Medical's Tollovid®, Sabtida, Febraayo 12, 2022, 1:00 duhurnimo - 3:00 galabnimo PST, gudaha Malibu ee Garoonka Kubadda Cagta ee Jaamacadda Pepperdine (Dibadda). Albaabada waxay furan yihiin 11:15 AM PST oo ka bilaabmaya aag ciyaar xiiso leh, oo bixiya hawlo, abaalmarino, hadiyado iyo cunto. Waxa kale oo jiri doona bandhig madadaalo ah oo wakhtiga nasashada ah.
Calanka Caanka ah ee Kubadda Cagta, oo uu soo bandhigay Todos Medical's Tollovid®, waa dhacdo madadaalo-qoyseed, oo u furan taageerayaasha da 'kasta leh. Shan iyo labaatan ciyaartoy iyo dad caan ah ayaa ku ciyaari doona ciyaarta kubbadda cagta calanka ee tartanka iyo Jawaab bixiyaasha ugu horreeya, Xubnaha Adeegga Militariga, iyo Kooxaha Dhallinyarada ee Wiilasha iyo Gabdhaha ee ka kala yimid California oo dhan ayaa lagu casuumay marti gaar ah. Ciyaarta kubbadda cagta ee dhididka caanka ah waxay ahayd dhacdo muhiim ah labadii iyo labaatankii sano ee la soo dhaafay. Sannadkan waxa uu noqon doonaa ciyaartii ku celiska ahayd ee sannadkii hore waxana uu ka soo muuqan doonaa halyeeyga NFL Quarterback Doug Flutie oo la ciyaari doona NBA Hall of Famer Tracy McGrady, iyada oo NFL Hall of Famers Andre Reed iyo Michael Irvin ay wada ahaan doonaan kabtanada. Ciyaartoydii hore ee NFL iyo baahinta suuqa dhaqaalaha, Jon iyo Pete Najarian ayaa noqon doona kabtanada caanka ah, oo matalaya qoyska Todos Medical.
Ciyaartoyda kale ee caanka ah ee hadda loo qorsheeyay inay ka qaybgalaan waxaa ka mid ah Anthony Anderson, Tory Lanez, Devin Hester, Wale, LaDainian Tomlinson, Reggie Bush, Anthony Pettis, Sergio Pettis, iyo kuwo kale. Bally Sports West waxay si toos ah u dayn doontaa ciyaarta 1:00 PM - 3:00 PM PST iyo wehelkayaga raadiyaha, iHeartRadio, ayaa sidoo kale xayeysiin doona dhacdada.
Dhididka caanka ah waxay ku faantaa inay u keento dhacdadan bulshada ee la awoodi karo ee madadaalada, cuntada, iyo madadaalada taageerayaasha magaalada Malibu, bulshooyinka ku hareeraysan, iyo kuwa xiiseeya isboortiga ee ka kala yimid daafaha aduunka.
Shati cusub oo Maraykan ah oo lagu ogaanayo PTSD ee Mawduucyada Nool
Diiwaangelinta Cunnada Cusub ee loogu talagalay dheefaha caafimaadka